News Collection: प्रकाश-बिना प्रकरणमा प्रचण्डले मुख खोलेपछि
प्रकाश-बिना प्रकरणमा प्रचण्डले मुख खोलेपछि
'ऊ (छोरो) असाध्यै सोझो हो।' घटना र विचार पत्रिकाका लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुराकानी गर्दै एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्डले' भनेको वाक्यांश हो यो। 'मैले बुझेको कुरा के हो भने ऊ धेरै सोझो मान्छे, असाध्यै सोझो,' प्रचण्डलले भनेका छन्- 'तर परिस्थिति त्यस्तै-त्यस्तै हुँदै जाँदा यस्तो भयो।'
प्रचण्डले भनेका छन्, 'जनयुद्धका कारण मैले छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षादीक्षा र संस्कार दिन नपाएको यथार्थ हो। यति हुँदा हुँदै पनि उसको गल्ती क्षम्य हुने खालको छैन।' प्रकाश प्रकरणका कारण एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिमा भन्दा पनि आफ्नो छोराका सम्बन्धमा 'के बोल्छन्' भन्ने कुरा सर्वत्र चासोको विषय बनेको थियो। विवाहित छोरा प्रकाशले अर्की विवाहित महिलालाई च्यापेर हिँडेपछि चेपुवामा परेका थिए, प्रचण्ड। आदर्श पिताको नाताले मात्र होइन, पार्टी अध्यक्षको हैसियतले पनि अहिले 'प्रकाश-बिना' प्रकरणको घनचक्करमा मुछिएका छन् उनी। पार्टीमा उनकै प्रस्तावअनुसार उहिल्यै प्रकाशलाई निलम्बित गरिसकिएको छ।
नेपाली समाजका लागि बहुविवाह दुर्लभ घटना होइन। कतिपय समुदायले यसलाई संस्कारकै रूपमा निरन्तरता दिएका छन्। यद्यपि प्रचण्डपुत्र प्रकाशले अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय सदस्य बिना मगरलाई च्यापेर हिँडेपछि यो इस्यु हट भएको हो। सञ्चार माध्यमदेखि सोसल नेटवकर् सम्ममा 'प्रकाश-बिना' प्रकरणले प्रमुखता पाइरहेको छ। त्यसपछि विकसित अनेकौ घटनाक्रम एवं टिका-टिप्पणीले पनि यो प्रकरणलाई ताजा राख्न मलजल गरिरहेको छ।
सौर्य दैनिकले बिनाका पति शंकर अधिकारीको अनुभूतिलाई कभर स्टोरी नै बनायो। सुर्खेतका शंकरले बिनासँग तीन वर्षअघि विवाह गरेका थिए। उनी पार्टीका पूर्णकालीन कार्यकर्ता हुन्। माओवादी विभाजनपछि बिना एमाओवादी र शंकर नेकपा माओवादीमा लागेका थिए। पत्रिकामार्फत शंकरले भनेका छन्- 'प्रचण्डको छोराका रूपमा उनको रवाफका सम्बन्धमा सुनेको थिएँ। त्यही व्यक्तिले मेरो जीवनको सबैभन्दा अमूल्य चिज खोस्ला भन्ने के अनुमान थियो र !' असार २१ गतेसँगै सुतेर बिहान छुट्टिएका उनीहरू त्यसपछि नभेटिने गरी अलग भए। 'म हाम्रो सम्बन्धमा इमान्दार हुन सकिनँ' पर्सिपल्ट भारतबाट बिनाले फोन गरेर सहज रूपमा भनिछन्- 'प्रकाशसित हिँडे।' शंकर विवाहपछि बिनाकै परिवारसँग बस्दै आएका थिए। अहिले उनले बिनाका आमा, बुबा र बहिनी बस्ने डेरा छाडिसकेका छन् भने बिनाका आमाबुबाको सालीसँग विवाह गर्ने प्रस्ताव पनि आफूले अस्वीकार गरेको उनले बताएका छन्।
यता कतिपय पत्रपत्रिकाले प्रचण्डकै डिजाइनमा यो सबै काम भएको दाबीसमेत गर्न भ्याएका छन्। छोरालाई आफ्नो उत्तराधिकारी बनाउने सम्भावना नदेखेपछि सम्पत्ति स्तान्तरण गर्ने भरपर्दो माध्यम निर्माणका निम्ति बिना प्रकरण रचिएको आरोप उनीहरूको छ। एक पत्रिकाले त 'प्रकाशले ठूलै रकम गोलमाल गरेको र त्यसलाई छायाँमा पार्न बिना मगर प्रकरण रचना गरिएको' सम्म लेखेको छ। उक्त पत्रिकाका अनुसार प्रकाशले साकार दाहालको नाममा ६ वटा बैंकमा खाता खोलेका थिए। ती सबै बैंकमा राखिएको करोडौं रुपैयाँ रित्याएर लगेपछि उक्त आरो पमा बल पुगेका भन्दै लेखिएको छ- 'प्रकाशले विदेशमै बसेर पिताको कमाइ संरक्षण गर्ने माओवादी नेताहरूको भनाइ छ।' प्रचण्ड पत्नी सीतालाई समेत त्यसमा मुछिएको छ। उनकै सल्लाहमा छोराले बिनालाई भगाएको धेरैको आशंका भएको पत्रिकाले बताएको छ। 'कुनै पनि कुरामा प्रकाशले सेल्फ डिसिजन गर्न सक्दैनन' पूर्वपत्नी प्रभाले निकटवर्तीलाई बताएको भन्दै एउटा अर्को पत्रिकाले लेख्यो-'प्रकाशले हरेक निणर् य बाबुबाट लिन्छन्।' यद्यपि यस्ता विवादास्पद समाचारको स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भने भएन।
'प्रकाश-बिना प्रकरण' लाई सोसल नेटवर्किङ साइटहरूले भने भिन्न रूपमा व्याख्या गरे। फेसबुक तथा ट्वीटर त असीमित गालीले भरिए। यसै सम्बन्धमा पत्रकार गंगा बीसीलाई प्रकाशले इमेलमार्फत स्पष्टोक्ति दिँदै लेखे- 'म मिडियामा आफ्ना बारेमा आएका टिका-टिप्पणीहरू हेरिरहे को छु। कसैको व्यक्तिगत जीवनमा यति धेरै टिका-टिप्पणी हुनु त्यति राम्रो होइन। मान्छेको जीवनमा उत्तारचढाव आउँछ।' यद्यपि उनकै पिताले नेतृत्व गरेको पार्टीले यो 'उत्तारचढावलाई' स्वाभाविक रूपमा लिएन। द्वन्द्वकालमा यस्ता क्रियाकलापमा संलग्न सर्वसाधरणलाई माओवादीले भाटे कारबाहीदेखि गाउँ निकालासम्मको सजाय दिएका थिए, त्यसैले पनि यो मुद्दा बढी उचालिनु स्वाभाविक थियो।
प्रकाश र बिना दुवै विवाहित नभइदिएको भए घटनाले यति चर्कोरूप लिने थिएन होला। शान्ति र संविधानका लागि भन्दै सगरमाथा आरोहण गर्ने क्रममा प्रकाश-बिनाको प्रेम अंकुराएको अनुमान गरिन्छ। सगरमाथा आरोहणबाट फर्किएपछि जनआस्थाले उक्त प्रेमसम्बन्धी खवर छापेको थियो। 'गलत समाचार छपाइदिए' साउन १२ गतेको कान्तिपुरमा प्रकाशित प्रकाशको इमेलमा लेखिएको छ- 'त्यतिबेलासम्म हामीबीच त्यस्तो केही थिएन।' उनका अनुसार समाचारपछि घरमा खटपट सुरु भयो। शंकाको दृष्टिले हेर्न थालियो। 'आज जुन हिसाबले प्रचार गरिएको छ, खत्तम भयो बिगि्रयो, पैसा लिएर प्रचण्डको प्लानमै भगाइयो। यस्तो काल्पनिक समाचार देख्दा दुःख र दया लागेर आउँछ' सम्पर्कविहीन भएर नभागेको भन्दै उनले लेखेका छन्- 'अनावश्यक अरूको जीवनमा तथा पार्टी र सीएमप्रति आक्षेप लगाउने काम नगरिदिनु होला।' उता प्रचण्डले माधवकुमार नेपालसँगको टेलिफोन वार्तामा भने आफूले छोरालाई नियन्त्रण गर्न नसकेको र ऊ फटाहा निस्किएको बताएको दाबी गर्दै समाचार पनि प्रकाशित भए।
प्रकाशले जनआस्थाको समाचारपछि नै पत्नी सिर्जनासँग 'असमझदारी' बढेको कान्तिपुरसँगको इमेलमा कुरा बताएका छन्। 'सगरमाथाबाट फर्किएपछि त्यो टिमका कृष्ण केसीले व्यक्तिगत मनमुटावका आधारमा गलत समाचार दिनुभयो' उनले लेखेका छन्- 'त्यसबेलासम्म बिनाजी र मबीच त्यस्तो केही थिएन' समाचारको विश्वास गरेर पत्नी सिर्जनाले 'म तपाईंसँग बस्न सक्दिनँ' भनेपछि आफू पागल जस्तै भएको प्रकाशको भनाइ छ।
'मेरा निम्ति यो धेरै अनौठो विषय होइन' छोराको विवाह प्रसंगका सम्बन्धमा प्रचण्डले पत्रकार धमलासँग भनेका छन्-'छोराछोरी आफूले भने जस्तै हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन।' युद्धका बेला बन्दुक बोकेको छोरा प्रकाशप्रति आफ्नो कुनै द्वेष, घृणा नभएको कुरा पनि प्रचण्डले बताएका छन्।
साह्रै तनाव भएकाले नगरकोटतिर जान्छु भनेर घरबाट निस्किएका थिए, प्रकाश। पछि प्रचण्डका निजी सचिव समीर दहाललाई फोन गरेर ' अब म फर्केर आउँदिन। हेडक्वाटरमा कसैलाई खुसी पार्न सकिनँ' भनेर म्यासेज गरेको बताइन्छ। यसबीच युवती, रक्सी र पैसा भनेपछि हुरु क्कै हुने प्रकाशलाई थोरै रक्सीले कहिल्यै नपुग्ने प्रचण्डका एक सहयोगीले बताएको भन्दै समाचार पनि छापियो, जसमा लेखिएको छ- ' युद्धकालमा पनि प्रकाशका नाम धेरै युवतीसँग जोडिएर आउँथ्यो तर प्रचण्डले त्यसलाई सामसुम पार्दै आएका थिए।' त्यहीबेला छोराका कारण आफ्नो राजनीतिनै सकिने हो कि भनेर प्रचण्डले आफू निकटका नेताहरूसँग चिन्ता पनि व्यक्त गर्ने गरेको कुरा उक्त समाचारमा दाबी गरिएको छ।
एक साप्ताहिक पत्रिकाले चाहि 'महात्मा गान्धीका सन्तान देवदास गान्धी जीवनभर मापसेमा लिप्त थिए' भन्ने उदाहरण दिएर यो काण्डलाई सामान्यकृत गर्न खोजेको छ। सारा राजनीतिज्ञ एवं तन्नेरीहरू आ-आफ्ना कामधन्दा छाडेर प्रकाश बिनाको पछि लागेको देख्दा...लाई भन्दा दे ख्नेलाई लाजभन्दै दुनियाँमा योभन्दा अर्को कुनै ठूलो घटना नै हुँदैन जस्तो भएको भनेर प्रकाश-बिना प्रकरणमा टिप्पणी गर्नेहरूमाथि नै व्यंङ्ग्य प्रहार गरेको छ उक्त पत्रिकाले।
दिल्लीको वास (प्रकाश-बिना)
पूर्वविवाहित बिनासहित बेपत्ता भएको हप्ता दिनपछि प्रकाश दिल्ली पुगेको खबर छापियो। पत्रपत्रिका तथा टेलिभिजनमा खबर आउनुअघि नै फेसबुक र ट्वीटरले यो खबरलाई सनसनी बनाएका थिए। प्रकाश र बिनाले भने आफ्नो फेसबुक एकाउन्ट डिएक्टिभेट गरेका थिए। भारतमा छापिने नेपाल दर्शन पत्रिकाले 'प्रकाशले अर्काकी स्वास्नी भगाएर दिल्ली ल्यायो भन्ने खबरले यहाँका नेपालीबीच सनसनी फैलाएको' खबर प्रकाशित गरेको थियो। यो जोडी दिल्लीबाट स्वीजरल्यान्डतिर जाने कुरा पनि सोसल मिडियामा छायो। यद्यपि पछिल्लो जानकारीअनुसार उनीहरू दिल्लीनजिकै गुडगाउँमा बसिरहेको बताइन्छ। प्रकाश-बिना दुवैले परिवारका सदस्यलाई फोन गरेर आफ्नो अवस्थाका बारेमा जानकारी गराइसकेका छन्। यसअघि उनीहरू भारतको पटनामा देखिएका थिए। स्रोतहरुका अनुसार अहिले प्रकाश आत्तिएका छन्। बुवासँग भन्दा आमासँग भावनात्मक रूपमा नजिक रहेका प्रकाशलाई प्रचण्डकै निर्देशनमा थप गलत कदम नचाल्न एवं सहज जीवन व्यतित गर्न आमा सीतामार्फत निर्देशन दिइएको छ। 'आजभोलि प्रकाश प्रत्येक दिनजसो परिवारका सदस्यहरूसँग सम्पर्क गर्छन्। यद्यपि उनले बुवा प्रचण्डसँग एकपल्ट कुराकानी गरेका छैनन्।' प्रचण्डको पारिवारिक स्रोतले साप्ताहिकसँग दावी गर्‍यो, 'ढिलो चाँडो प्रकाश गुपचुप नेपाल फकर् नेछन् र तेस्रो विवाहलाई आधिकारिता दिन सक्छन्।'
प्रकाश गत सोमबार फेसबुकमा करिब १५ मिनेट बिताएर पुनः गायव भएका छन्। उक्त अवधिमा उनले एउटा स्टार्टससमेत लेख्न भ्याए। स्टार्टसमा विवाहको प्रसंग भने उल्लेख छैन। बरु, सगरमाथा आरोहणका दौतरी कृष्ण केसी र युवराज दुलाल (शरद)लाई गाली गरेका छन्। प्रकाशले यस्तो स्टार्टस लेखेछन्- 'शरद र कृष्ण केसीले आफूलाई सफल भएको ठानेका होलान, उनीहरुले अहिलेसम्म गरेको पापको फल आवश्य पाउनेछन्। सगरमाथा चढाउने बेला मेरो खुट्टा ढोग्न आएर अहिले मलाई बदनाम गराउने ? तिमीहरूको बलबुताले भ्याउने जति गरे नी तिमीहरू कहिल्यै सगरमाथा चढ्न सक्ने थिएनौं। अहिले तिमीहरूको फूर्ति ?'